Queer Pakistan Voabahana: Sabatra Roa Lelan’ny Fandrakofam-Baovaon’ireo Media Ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2013 18:46 GMT
Pejy hoe Voasakana! ny Queer Pakistan tamin'ny 24 Septambra 2013
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny teny Anglisy tamin'ny 25 Septambra)
Voabahana omaly (24 Septambra) ilay tranonkalam-baovao Queer Pakistan vao avy natomboka tsy ela akory, nifanojo indrindra tamin'ny andro namoahana lahatsoratra iray teto amin'ny Global Voices nanasongadinana ilay tranonkala. Ny fifankatiavan'olon-droa mitovy fananahana dia sady voaheloky ny lalàna no helohin'ny ara-pivavahana ao Pakistana, ary ny tanjon'ilay tranonkala dia ny hanome habaka tsara antoka ho an'ireo Pakistane tanoravavy mpifankatia, ny lahy mpifankatia ary ireo nanova fananahana mba hiresahany amin'ny fomba tsy itononanana anarany mikasika ny fironany ara-pananahana.
Tao anatin'ireo roa volana fohy nisiany, dia sady nahazo tehaka no niharan'ny felaka ihany koa ilay tranonkala tety anaty aterineto tety noho ny fahasahiany niresaka zava-pady. Ny tatitra nataon'ny Al-Jazeera sy ny Deutsche Presse-Agentur (DPA) mikasika ilay vaovao dia nanampy nanosika ny fitsidihana ilay tranonkala hahazo 10.000 azy manokana tamin'ny volana lasa iny, miaraka aminà salam-pitsidihana 7 minitra isnisany. Ireo lahatsoratra roa momba ny vaovao ireo dia nanindry fa ireo mpanivana ny aterineto any Pakistana dia sarotiny manokana amin'io karazana votoaty io, saingy ireo Pakistane mpanao gazety manoratra ho an'ny DPA dia nandeha lavidavitra kokoa tamin'ny fitakiana fanambarana iray mikasika ilay tranonkala avy amin'ny Pakistan's Telecommunication Authority (PTA) – Manampahefana ao Pakistana mandrindra ny Fifandraisan-davitra – tany amin'ny faramparan'ny vola Aogositra tany.
Rehefa nanontaniana, nilaza ny mpitondra tenin'ny PTA fa efa nandinika “sahady ny votoatin'ilay tranonkala ny governemanta” ary mety hanakana azy io raha hitan-dry zareo fa maniratsira ny ara-pinoana sy vetaveta ny votoatiny. Etsy ankilan'ireo fitanisana avy amin'ireo mpanohana ny Queer Pakistan, ilay mpanao gazety dia nitafatafa taminà mpitarika ara-pivavahana iray ihany koa, izay nilaza hoe “Mifanohitr tanteraka amin'ny finoana Silamo ireo fanao hita tao. Andraikitry ny governemanta ny manara-maso/mifehy azy ireny.” Mety ho io fitadiavana tsy ampy fahamatorana ny mizana marin-toerana ho an'ny fampitam-baovao io ve no nampaneno ny lakoloky fanairana nanambara ny fahafatesan'ilay fandraisan'andraikitra sahisahy?
Fety Fankalazana ny Gay pride . Sary an'i lewishamdreamer, tao amin'ny Flickr (CC BY-NC 2.0)
Efa iraisan'ireo “mpiadin'ny fitendry” ao Pakistana ny fanairana ny manampahefana rehefa mahita votoaty hitandry zareo ho tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina na ny ara-pinoana ry zareo ka tsy mahagaga araka izany raha mety hiafara amin'ny hoe voabahana ilay tranonkala. But alerting the authorities directly for public comment cannot have helped.
Rehefa tonga amin'ny hoe hifandray amin'ny media, ireo mpikatroka mafana fo ety anaty dizitaly dia tokony hahatsiaro fa tsy mendrika hametraham-pitokisana foana akory ny mpanao gazety raha vao vaovao saropady no kiraina. Raha be loatra ny fandrakofam-baovao atao amin-javatra iray dia mety ho ratsy ny vokatra azo, indrindra rehefa lahatsoratra tsy dia maneho loatra ny zoro manasohaso sy manome tombony an'ilay zava-misy no mivoaka. Tokony halalaka amin'ny fandrakofana ireo tantara tiany havoka ny mpanao gazety — saingy mila mahatsapa tsara ireo mpikatroka mafana fo ny amin'ireo risika mety haterak'izany.
Efa tsy indray mandeha fotsiny tany aloha tany, nahita mpitatitra vaovao nampiasa tsy tamim-pitandremana ny tena anarany aho, raha tokony ho solon'anarana, izay mahatonga ahy foana manoro hevitra ireo mpikatroka mafàna fo tsy mitonona anarana mba hanana anaram-petaka roa fa tsy tokana (ny iray afaka atolotra ho toy ny “tena anarana” ho an'izay manontany, raha ny iray kosa tsy ilaina fantatra velively).
Ho an'ny Queer Pakistan, toy ny solafaka an-dàlana ihany izy raha nakatona ny tranonkala — takatr'ilay vondrona tsara fa nanosika ny fetra ry zareo mikasika izay lazaina ho azo ekena ao Pakistana. Ilay tanora tsy mitonona anarana nanorina ny tranonkala dia nampiantrano ny tranokalany tamin'ny fomba antsoina hoe ‘mirroring’ tany anaty sehatra samihafa tany ary manamafy fa tsy kivy, tamin'ny filazana hoe “Tsy ho resy tsy miady manoloana ny PTA izahay!”
Ofisialy ity izao! Voarara tsy ho azo jerena ny QueerPK ao Pakistana nanomboka omaly! Efa miketrika hanao ‘mirroring’ tranonkala ho aminà sehatra iray vaovao izahay! Aza misy miala
— Queer Pakistan (@QueerPK) 25 Septambra 2013